Sanju – Page 2 – Filimside.net
Rasmi: Filimka Sanju iyo Sabtigiisa afaraad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
July 22, 2018 Zakarie Abdi
Ranbir Kapoor filimkiisa Sanju ayaa 75% sare u kac sameeyay sabtigiisa afaraad wuxuuna keenay 2 Crore taasi oo ka dhigan in ganacsigiisa haatan maraayo 322 Crore (Trade Figure). Sanju maanta oo Axad ah ganacsigiisa 325 Crore ayuu gaari […]
Rasmi: Filimka Sanju iyo Jimcadiisa 4-aad ganacsiga uu sameeyay 320 Crore ayuu gaaray!
July 21, 2018 Zakarie Abdi
Ranbir Kapoor filimkiisa Sanju ayaa keenay 1.25 Crore (Trade Figure) Jimcadiisa afaraad wuxuuna sameeyay 70% hoos u dhac ah marka lala bar bar dhigo Jimcadiisii sedexaad ganacsiga uu sameeyay waxaana ugu wacan in filimka Dhadak saameyn weyn […]
Waxaa cajiib ah Janhvi Kapoor iyo Ishaan Khattar filimkooda Dhadak oo ay fanka kusoo galeen inuu kaalinta 8-aad ka galay filimada ugu bilaabashada wanaagsan 2018. Dhadak maalinta kowaad wuxuu keenay 8.50 Crore (Trade Figure) wuxuuna ka lacag […]
TOP 10 THIRD WEEK All TIME: Sanju oo kaalinta 6-aad ka galay filimada todobaadka 3-aad lacagaha ugu badan soo xareeyeen
Filimka Sanju todobaad walbo ganacsiga uu sameeyo taariikh ayuu ka dhigayaa dhanka Boxoffice-ka ama iskoorada horey loo dhigay ayuu wax ka dhigayaa. Sidaa darteed Sanju todobaadkiisa sedexaad wuxuu keenay 28.95 Crore (Trade Figure) sidaasna wuxuu ku noqday […]
Rasmi: Filimka Sanju oo ganacsi adag sameeyay todobaadkiisa sedexaad
Ranbir Kapoor iyo Director Rajkumar Hirani filimkooda Sanju ayaa ganacsi adag sameeyay todobaadkiisa sedexaad wuxuuna keenay 29 Crore (Trade Figure). Filimka Sanju wadarta guud mudo sedex todobaad ama 21-cisho ah wuxuu soo xareeyay 319 Crore (Trade Figure) wuxuuna […]
Rasmi: Filimka Sanju iyo Talaadadiisa sedexaad ganacsiga uu sameeyay maanta ayuu Bajrangi Bhaijaan dhaafi doonaa!
July 18, 2018 Zakarie Abdi
Filimka Sanju ayaa ganacsi wacan sameenayo maal maha shaqada weliba isaga ayaa Boxoffice-ka kaga wanaagsan filimada tiyaatarada ku cusub sida Soorma iyo Ant Man marka maal maha shaqada la guda galay. Sanju ayaa keenay 2.25 Crore Talaadadiisa […]
Rasmi: Filimka Sanju Iyo Isniintiisa Sedexaad Lacagaha Uu Keenay
July 17, 2018 Zakarie Abdi
Ranbir Kapoor filimkiisa Sanju ayaa keenay 2.50 Crore isiintiisa sedexaad taasi oo ka dhigan ganacsigiisa guud inuu haatan sii maraayo 312 Crore (Trade Figure). Sida muuqato filimka Sanju todobaadkiisa sedexaad wuxuu keeni doonaa 29 Crore […]
Rasmi: Filimka Sanju iyo Axadiisa sedexaad ganacsiga uu sameeyay waxay ka dhigtay 310 Crore inuu 17-maalmood ku gaaro!
Ranbir Kapoor iyo Director Rajkumar Hirani filimkooda Sanju ayaa weli Boxoffice-ka wacdaro xoogan ka dhigaayo wuxuuna Axadiisa sedexaad keenay 8.50 Crore (Trade Figure) taasi oo ka dhigan todobaadkiisa sedexaad sedexda maalmood ee ugu horeyso inuu 20 Crore […]
Awood Cusub: Ranbir Kapoor oo Salman Khan Iyo Aamir Khan Darajada 300 Crore kula biiray
July 15, 2018 Zakarie Abdi
Ma sahlano in atoore sameeyo 200 Crore filim soo xareen karo xitaa asigoo fasax heesto balse Ranbir Kapoor darajada 300 Crore ayuu fasax la’aan gaaray! Ranbir filimkiisa Sanju ayaa 300 Crore darajo ahaan gaaray gudaha […]
Rasmi: Filimka Sanju sabtigiisa sedexaad ganacsiga uu sameeyay wuxuu gaaray darajada 300 Crore
Ranbir Kapoor filimkiisa Sanju ayaa sare u kac adag sameeyay sabtigiisa labaad wuxuuna keenay 6.75 Crore taasi oo ka dhigan in haatan mudo 16-maalmood ah uu soo xareeyay 300.50 Crore (Trade Figure). Sanju ayaa yara gaabinayo waxaana ugu […]